Wednesday May 23, 2018 - 08:01:12 in Wararka by Super Admin
Magaalada Al Qaahira ee caasimadda wadanka Masar aya amarti gelisay shir ka dhan ah halganka lagula jiro ciidamada shisheeye ee duullaanka kusoo qaaday dalka Soomaaliya.
Shir socanaya muddo laba maalmood ah ayna iska kaashanayaan Masar iyo Ururka Midowga Afrika ayaa diiradda lagu saarayaa sidii dhanka Fikirka lagula dagaallami lahaa Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee hoggaaminaysa dagaalka lagula jiro soo duulayaasha.
Mas'uuliyiin Masaari ah oo furitaanka shirka Khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in ay isku keeneen in kabadan 30 qof Soomaali ah kuwaasi oo laga wacyi gelinayo wax ay ugu yeereen Fikirka Xagjirka ah ee sababaya ka qeyb qaadashada Jihaadka.
"Shirkan oo uu soo qaban qaabiyay markazka caalamiga alqaahira ee xallinta khilaafaadka ayaa looga golleeyahay sidii loo xoojin lahaa ka qeyb qaadashada dhalinyarada Soomaaliyeed ee dadaalka looga hortagayo xagjirnimada iyo argagaxisada , iyo isdhexgalka khibradaha u dhexeeya dhalinyarada Masaarida iyo dhalinyarada soomaalida, oo ku saabsan khibradda hoggaamineed ee Masar" ayuu yiri mas'uul katirsan madaxtooyada Masar.
Sidoo kale madasha shirka waxaa ku sugan khubaro ka socota Q.Midoobe iyo dowladaha Reergalbeedka ee ku lugta leh dagaalka ka dhanka ah jamaacaadka Jihaadiga ah, saraakiil ka socotay Taliska AMISOM oo kalimado ka jeediyay shirka ka dhanka ah Al Shabaab ayaa muujiyay sida ay uga walaacsanyihiin kobaca jihaadiga ah ee dalka Soomaaliya.
Shirkan ayaa imaanaya xilli uu 11 sana jirsaday duullaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya walina Xarakada Al Shabaab ay tahay awood jihaadi ah oo halis gelinaysa maamullada gummeysiga u shaqeeya iyo danaha 'Beesha Caalamka' ee Soomaaliya.
Fikirka jihaadiga ah ayaa bulshada Soomaalida kusii dhax faafaya inkastoo dhinacyada cadawga ah ay adeegsadeen asaaliib dhan walba ah sida iyagoo wadaada xumayaal soo shaqa geliyay si ay usumcad xumeeyaan halganka jihaadiga ah balse waxba matarin dadaaladaasi.
Ciidamada Kenya oo xiray qaar kamid ah Shirkadaha Xawaaladaha Soomaalida Magaalada Nairobi.
Xoghayaha Guud ee Q.Midoobay "Bishii Maarso oo kaliya Soomaaliya waxaa ka dhacay 77 qarax".
Hormuud oo Haween dan yar lacag ugu qeybisay magaalada Muqdisho (Daawo Sawirrada).
Sheekh Mahad Warsame Abuu C/Raxmaan Oo Jeediyey Kalimad Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Xaaladda Jihaadka Bariga Africa [DHAGEYSO]